मानिसको शरीरमा हर्मोनहरू हुन्छन् । ती हर्मोनको फरक फरक काम हुन्छ । त्यसको मात्रा शरीरमा सन्तुलित रुपमा हुनु पर्छ । त्यस्को आफ्नै मात्रा र अर्डर हुन्छ । थाइराइड भनेको हर्मोनको डिस्अर्डर हो । थाइराइड मानिसको घाटीमा हुने एउटा ग्रन्थी पनि...
सरकारले कोरोना संक्रमण बढेसँगै केही क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले तत्काल लकडाउन नगर्ने निर्णय गरे पनिकोभिड१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) ले जिल्लाको अवस्था हेरेर जहिले पनि लकडाउन गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको...
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ठूला नेताहरूप्रति आक्रामक बन्दै गएका छन् । कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा गाउँमा नेता आउँदा कुन चोर आएछ भनेर मानिसहरूले भन्न थालेको बताएर चर्चामा आएका लिङ्देनले उच्च राजनीतिक तहका नेताहरूविरुद्ध फायर खोलेका हुन्...
पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकाे ६९ करोड रुपैयाँको भवन निर्माणको ठेक्काविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको दुई सातामै अख्तियारले मल खरिदमा अनियमितता गर्ने १० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारलेगत वर्ष रासायनिक...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशनअन्तर्गत जारी बन्दसत्रमा आज केन्द्रीय सदस्य चयनको प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । तर इलेक्सनबाट कि सेलेक्सनबाट भन्नेबारे निश्चित छैन । माओवादीको संशोधित विधानअनुसार खुलातर्फ १४५ जना र समानुपातिकतर्फ १५४ जना निर्वाचित हुनेछन् । माओवादी केन्द्रले सहमतिमै...
प्रदेश १ पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले पदमुक्तकाे चार महिनापछि मात्र सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन् । चार महिना अघि मुख्यमन्त्रीबाट हटे पनि सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्दै आएका राईको तीव्र आलोचना भएपछि उनले अहिले आएर गाडी फिर्ता गरेका हुन् । उनले काठमाडौंमा...
माओवादी प्रतिनिधिको साझा विचार : कहाँबाट आयो हाम्रा नेताको यत्रो सम्पत्ति ?
विचार केन्द्रित बहस गर्ने भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन काठमाडौंमा जारी छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना नेताहरु बिलासी भएकाे बताइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्ना नेताहरूकाे यति धेरै सम्पत्ति कसरी जोडियो भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । महाधिवेशनको पाँचौँ दिन पुग्दा पार्टी...
वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ गते र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रीहरूसँग शुक्रबार छलफल गरेको निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा वैशाख १४ गते र दोस्रो चरणको २२ गते निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष...
कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमण वेभ अन्य भेरियन्टको तुलनामा मध्यम स्तरको भएको बेलायतमा गरिएको पछिल्लो एक अध्ययनले जनाएको छ । यसअघि दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा पनि ओमिक्रोन वेभ मध्यम स्तरकै देखिएको थियो । ओमिक्रोनबाट संक्रमितमध्ये थोरै मात्र अस्पताल भर्ना...
यी हुन् कांग्रेस महाधिवेशनमा निर्वाचित सबै अनुहार
पुस ०८, २०७८
नेपाली कांग्रेसको१४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्व चयन सकिएको छ । मंसिर २४ गते उद्घाटन भएर २७ गते निर्वाचन भएको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको मतगणना पुस ८ गते बिहीबार साँझ सकिएको हो । महाधिवेशन उद्घाटन भएको १४ औँ दिनको दिन मतगणना सकिएको...
स‌सद् अवरोध हटाउने बाटो के होला ?
पुस ०७, २०७८
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् सहज रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन । संसद् बैठकमा एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले &#39;जबरजस्ती&#39; संसद् चलाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका सांसदमा हुनु पर्ने भए पनि एमाले...